လင်းပြာနွေ: July 2007
ကျွန်မနှင့် ရီ ဝေေ၀ပွဲတော်ည…..
ကျွန်မနှင့် ရီ ဝေေ၀ပွဲတော်ည လက်ကောက်ကလေးများ
မီးသီးကလေးများ မှိတ်တချည်လင်းတလှည့်ဖြစ်နေသော ပွဲတော်လမ်းကြားလေးထဲတွင် ကျွန်မစမ်းတ၀ါးဝါး လျှောက်သွားနေ၏။
ဓာတ်စက်သံ…ဆိုင်းသံဗုံသံနှင့် လူသံများခပ်မျှင်းမျှင်း ခပ်မြိုင်မြိုင်ပျံ့  လွင့်နေ၏။ အပြိုင်အဆိုင်ဖိတ်ခေါ်နေကြသော ပြပွဲများကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ ရ၏။
တချို့ ကကြောက်မက်ဖွယ် တီကောင်ကမ္ဘာ….တချို့ ကထူးဆန်းသတ္တ၀ါကြီးများ… တချို့  ကမြွေဖြစ်သွားသောလူ… စသည်ဖြင့်
မြေပေါ်ခင်းကျင်းရောင်းချနေသော အမျိုးအစားစုံလင်လွန်းလှသည့် မျက်နှာဖုံးများ……
ပြောင်ပြောင်လက်လက် ညှို့ ယူဖမ်းစားတတ်သော ချစ်စရာပစ္စည်းကလေးများ…အမျိုးအစားစုံပွဲဈေးမုန့်များ…
ကောင်းကင်သို့ထိုးတက်ရန်ဟန်ပြင်နေသော မိုးပျံပူဖောင်းများ…စသည်..စသည်ဖြင့် ပွဲတော်လမ်းကြားလေးသည် မြိုင်ဆိုင်နေ၏။
ကျွန်မသည် ပွဲတော်ရောင်လဲ့နေသော လမ်းကျဉ်းလေးထဲတွင် လူများအားဝှေ့ကာ ရှောင်ကာဖြင့် ငေးငေးမောမောသွားနေ၏။ ကျွန်မ၏ မျက်လုံးများသည် တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ ပြပွဲရုံများ ထက် ခင်းကျင်းထားသော ဈေးသည်ကလေးများထံသို့ ရောက်နေ၏။
ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့  အရောက်တွင် ကျွန်မရပ်လိုက်၏။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မဟူရာရောင်ရွှဲနင့်နေသော အပြောက်အမွှန်းများ စီရံထားသည့် တစ်စုံတစ်ရာသည် ကျွန်မအားဆွဲငင်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုတောက်ပနေသော အရာလေးသည် ကျွန်မစိတ်ဝိညာဉ်အား သိမ်းပိုက်သွားလေပြီ၏။
ကျွန်မရင်ထဲ၌ပိုင်ဆိုင်လိုမှူပြင့် ရှိန်းမြနေ၏။ လက်ကောက်လေးသည် အနက်ခံပေါ်တွင်
လိမ္မော်…အ၀ါ…အစိမ်း အပြောက်အမွှန်းကလေးများဖြင့် ဆန်းကြယ်စွာ ချယ်သထား၏။
လက်ကောက်လေး၏ ဆန်းပြားမှူသည် ကျွန်မအား ညှို့  ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေမည်။
“အဒေါ် ဒါလေးဘယ်လောက်ပေးရမလဲ ”
“သမီး လေးရာပဲပေးပါ ”
ဈေးသည်အဒေါ်ကြီးသည် ရည်ရည်မွန်မွန်ဖြင့် ပြန်ပြော၏။ လက်ကောက်လေး၏ တန်ဖိုးသည် ကျွန်မပေးဝယ်နိုင်သော အနေအထားတွင်ရှိနေ၏။
ထို့နောက် ရွှင်မြူးစွာဖြင့် ကျွန်မလက်တွင် စမ်းဝတ်ကြည့်လိုက်၏။ ကျွန်ကလက်ပေါ်၌လက်ကောက်လေးသည် ဆန်းပြားစွာဖြင့်တောက်ပနေ၏။
ကျွန်မသည် ကြည်နူးမှူဖြင့် လက်ကောက်လေးအား ခပ်ကြာကြာစိုက်ကြည့်နေမိ၏။ စိုက်ကြည့်နေရင်းပင် ကျွန်မစိတ်တွင့်သို့ ထူးဆန်ဒသော ခံစားမှူ တစ်ခုစီးဝင်လာသည်။
“ဘာ”ပါဟု အတိအကျပြောရန် ခဲယဉ်းသော ခံစားမှူတစ်ခု…..
မပြည့်စုံသေးဘူး…. ခံစားမှု သုံးလေးမျိုးရောနှောပါဝင်နေသာ ခံစားမှူမျိုး…… ကျွန်မလက်ကောက်လေးအားထက်၍ သတိထား ကြည့် မိချိန်တွင်တော့
ထိုလက်ကောက်သည် အရောင်စုံလွန်းလှသည်ဟုထင်လာမိသည်၏။ အပြောက်အမွှန်းများမှာလည်း မျက်စိနောက်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးများပြားလွန်းနေ၏။
စိုပြောင်နေသော မဟူရာရောင်သည်လည်း ကျွန်မ၏စိတ်ကို ထိုင်းမှိူင်းလာစေ၏။ ကျွန်မစိတိကူးကြည့်သည်။ အကယ်၍ ထိုလက်ကောက်အား ကျွန်မ၀ယ်မည်ဆိုလျှင် ထိုလက်ကောက်သည် ကျွန်မလက်၌အမြဲလိုက်ပါနေပေတော့မည်။ ထိုအခါ ထိုအပြောက်အမွှန်းများနှင့် မဟူရာရောင်အနက်ခံပေါ်က ဆေးရောင်စုံများသည် ကျွန်မစိတ်အားတရိရိ တနုတ်နုတ်ဖြင့် ခလုတ်တိုင်နေပေတော့မည်။ ထိုသို့ဖြင့် သီးမခံနိုင်လောက်အောင် စိတ်နောက်ကျိရသောတစ်နေ့တွင်
ထိုလက်ကောက်အား လွှင့်ပစ်သည့် အဆင့်သို့ပင်ရောက်သွားနိုင်ပေသည်။
ရဟတ်စီးနေသူများထံမှ အော်သံများလွင့်ပျံ့ လာခြင်းဖြစ်သည်။ ရင်ဖိုကြောက်ရွံ့  မှုဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုကို အမဲလိုက်နေကြသူများ…..
ကျွန်မခေါ်င်းထဲသို့ အသိတစ်ခု လက်ခနဲပြိုကျလာ၏။
ကျွန်မသည် လက်ကောက်လေးအားပြန်ချွတ်ပြီးပေးလိုက်၏။ စိတ်ထဲ၌ အနည်းငယ်ပေါ့ပါးသလို ခံစားလိုက်ရ၏ (လွတ်ငြိမ်းမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။)
ရှေ့ ဆက်သွားလျှင် ဒီ့ထက် အနည်းငယ် ရိုးရှင်းလှပသော လက်ကောက်တရံတလေ တွေ့ကောင်းတွေ့ဦးမှာပဲဟု ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ဖြေတွေးတွေး ထားလိုက်၏။
“အဒေါ် မယူတော့ဘူးနော် ”
ဈေးသည်အား အားနာနာနှင့်ပင် ပြန်လှည့်ထွက်လာလိုက်၏။ပွဲတော်လေးသည် ရေချိန်ကိုက်နေပေပြီ။ မီးရောင်များကြား မူးဝေနေပေပြီ။
လမ်းကျဉ်းလေးထဲ ကျွန်မဆက်လျှောက်လာခဲ့၏။တစ်နေရာ၌ လူတစ်စုသည်လက်ကောက်ပစ်နေကြသည်။(လက်ကောက်ပစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ
ဖန်ပုလင်းလေးများတွင် လက်ကောက်များစွတ်ဝင်သွားအောင် ခင်လှမ်းလှမ်းအနေအထားမှ ပစ်ယူရသောကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။)
လက်ကောက်ဆယ်ကွင်းတွင် သုံးလေးကွင်းဝင်အောင်ပင်မနည်းပစ်ယူနေကြရသည်။ လက်ကောက်ပစ်နေသောသူသည် သူ၏ပစ်ချက်တစ်ချက်
လွဲသွားတိုင်း ကျိတ်မနိုင်ခဲမရ ညည်းညူနေ၏။ ချိန်မှတ်နှင့်လွဲချော်သွားသော လက်ကောက်ကွင်းများမြေပေါ်တချွင်ချွင်ကျနေသံကို ကြားနေရ၏။
(ထိုတချွင်ချွင်အသံသည် ရှုံးနိမ့်ခြင်း၏အသံ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။) ပွဲတော်သည် ကျွန်မအားညှို့  ယူလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့ဖြင့် ကျွန်မသည်နောက်ထက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်အတွင်းသို့ ၀င်ခဲ့ပြန်သည်။ ထိုဆိုင်တွင်လည်းအမျိုးအစားစုံ တောက်တောက်ပပပစ္စည်းကလေးများ
ခင့်ကျင်းထား၏။ ကျွန်မသည်လက်ကောက်ကလေးများအား တစ်ခုချင်းစေ့စပ်စွာကြည့်နေမိ၏။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလက်ကောက်လေးတစ်ရံအား ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ကောက်လေးများသည် အမျိုးအစားစုံလင် လွန်လှပေသည်။ ထိထဲမှ ဗေဒါရောင် ၊ လက်ကောက်အကြည်လေးတစ်ရံအား
ကျွန်မသဘောကျသွား၏။ ထိုလက်ကောက်လေးသည် မောင်းလို အဟကလေးနဲ့ ဖြစ်သည်။
လက်ကောက်ပေါ်၌ ဘာအပျောက်အမွှန်းမှခြယ်သထားခြင်း မရှိ။
အသားကိုဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော ဖန်လက်ကောက်ကြည်ကြည်လေးမျှသာဖြစ်သည်။ လက်ကောက်လေး၏ ရှင်းသန့် ကြည်လင်မှုသည် ကျွန်မအာရံ၌စွဲကပ်သွား၏။ ကျွန်မစိတ်ထဲ၌ ပထမတစ်ခေါက်မဟူရာလက်ကောက်လေးထက်ပင် ပို၍ သဘောကျနေမိ၏။
လက်ကောက်လေးအား ကျွန်မကောက်ကာငင်ကာဖြင့် ကျွန်မစွတ်ကြည့်လိုက်၏။ ကြည်ဖန့်တောက်ပနေသော ဗေဒါရောင်… ၀ယ်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ကျွန်မလက်ကောက်လေးအား နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်၏။
ကျွန်မအာရုံထဲ၌ မိုက်ခနဲ… သွားပြီ.. အဲဒီခံစားချက်… တစ်စုံတစ်ရာရောပြွန်းနေသော အဲဒီခံစားချက်…. မသတီစရာခံစားချက်...
ကျွန်မသည် ပွဲတော်လမ်းကြားလေးထဲ၌ တစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက် ရွေ့ ရွေ့  ၀ဲလည်နေ၏။
ကြာလာသည်နှင့်အမျှပွဲတော်လမ်းကြားလေးသည် ကျွန်မအတွက်မှော်ရုံတောတစ်ခုနှင့်ပင် တူတူလာပါတော့သည်။ တစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက်ဖြင့် ကျွန်မစမ်းစမ်းဝတ်ကြည့်ခဲ့သော လက်ကောက်ကလေးများလည်း မြောက်များစွာကျန်ရစ်ပေပြီ။
အသွင်စုံ….အရောင်သွေးစုံ… တန်ဖိုးအစုံလက်ကောက်များ ကျန်ရစ်ခဲ့ပေပြီ။ ကျွန်မသည်လည်း ပွဲဈေးတန်းမဆုံးသ၍ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိသည်ဟူသော စိတ်အစွဲတစ်ခုဖြင့် တရွေ့ ရွေ့ တရိပ်ရိပ် တိုးဝင်သွားနေ၏။ ကျွန်မအာရုံထဲတွင်တော့ ကျွန်မလက်၌ အမြဲလိုက်ပါနေမည့် လက်ကောက်သည် မည်သို့သောလက်ကောက်မျိုး ဖြစ်မည်နည်းဟု အကြိမ်ကြိမ်မေးခွန်းထုတ်နေမိသည်။
ပွဲတော်လမ်းကြားလေးသည်လည်း တစ်စတစ်စ ဖျော့တော့လာပေပြီ။ ကျွန်မလက်ထဲတွင်တော့ ခုချိန်ထိ မည်သည့်လက်ကောက်မျှ တွဲခိုလိုက်ပါလာခြင်းမရှိသေးပေ။
လမ်းတစ်ဖက်ရှိ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုအား လှမ်းကြည့်လိုက်မိ၏။
…..“ဆပ်ကပ်ထဲမှလူ”…… ကျွန်မစိတ်များထွေနေပေပြီ။ ဟိုး..ခက်လှမ်းလှမ်း၌ မီးရောင်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်။
ပွဲဈေးလေး၏ အဆုံးသတ်နေရာလည်းဖြစ်ပေမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၌ လူသူများကျဲပါးလာနေ၏။
ကျွန်မသည် လက်ကောက်တစ်ကွင်းဝယ်ရန် ပွဲဈေးသို့ သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်မသည် ကိုယ့်လက်၌ထာဝရ ဆင်မြန်းရမည့်လက်ကောက်အား
မည့်သည့်လက်ကောက်မျိုးဖြစ်ရမည်ကိုပင် ဂဃနဏမသိသူဖြစ်သည်။ ကျွန်မသည်လက်ကောက်ဆင်မြန်းရခြင်းအား အမှန်တကယ်နှစ်သက်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်
ဟုတ်ပါသလား။ ကျွန်မသည် ပွဲဈေးတန်းသို့ တကယ်ပဲလက်ကောက်ဝယ်ရန်လာခဲ့ပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် ကျွန်မလျှောက်ခဲ့ဖူးသော ပွဲတော်လမ်းကြားပေါင်း မည်မျှရှိနေ ပြီနည်း။ သို့ဆိုလျှင် ကျွန်မစမ်းဝတ်ကြည့်ခဲ့ဖူးသော လက်ကောက်ပေါင်း မည်မျှရှိနေပြီနည်း။ သို့ဆိုလျှင်………..
ထိုနေ့က ပွဲတော်သိမ်းချိန်အထိ ကျွန်မလက်ကောက်တစ်ကွင်းမှ မရလိုက်ပါ။ ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 1:00 PM 1 comment:
Posted by လင်းပြာနွေ at 6:02 PM2comments:
ခုလို ညနေခင်းမျိုး ငါရှူရှိုက်ရလိမ့်မယ်မှန်း
ချစ်သူက လရောင်ကို ရွက်ခြောက်တွေလို နင်းခြေလိုက်ချိန်မှာ
ငါက သက္ကရာဇ်တွေမှာ ကြယ်လိုကြွေရစ်ခဲ့တယ်။ ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 12:39 AM2comments:
အဝေးကြီးမသွားနဲ့ကလေးရယ်........
အဲဒီလို မတားရက်လို့ 
မင်းရဲ့ ခြေသံတွေကိုပဲ တယောတေးသွားတစ်ပုဒ်လို
ကလေးကို အိပ်မက်လှလှလေးမက်စေချင်ရဲ့ ......
မင်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ မပြောနဲ့ ပေါ့။
ဖျက်ခနဲပိတ်ချသွားမယ့် တံခါးရွက်တွေရဲ့ အသံကို
စိုးရွံ့ သိမ်ငယ်နေမိတာတော့ အမှန်ပဲ ။ ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 11:43 PM No comments: